Microsoft Office 365 leh SharePoint: Combination Perfect! ITS
Microsoft Office 365 oo leh SharePoint: Isku-dhafka Dhamaystiran
Microsoft Office 365 iyo SharePoint
SharePoint iyo Xafiiska
Ku dar Ins
Ku dheji sanduuqa Microsoft
Microsoft Office waxay u nugul tahay in ay noqoto mid nadiif ah oo ka mid ah jawi kasta oo shaqeynaya, Xafiiska 365 wuxuu ka caawiyay hirgelinta qorshaha. Shirkadda amaanka ee Skyhigh Skyhigh Networks waxay ogaatay in maamulka uu ahaa qalabkii ugu darnaa ee loo adeegsado daruuri ku salaysan macaamiisha. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee aaladda caanka ah waa in shuruucda isuduwaha ay la socoto software kale oo wax ku ool ah, kor u qaadista waxtarka iyo waxtarka.
As Xafiiska 365 waxay u muuqataa in ay noqoto mid heer jajab ah, sidaa daraadeed SharePoint, qalabka wadajirka ah ee Microsoft. Isticmaalka SharePoint, kooxuhu waxay ka wada shaqeyn karaan hawlgal isku mid ah, iyadoo casriyadoodu si xawli ah u heli karaan. Halkii laga heli lahaa dhibaatooyinka waraaqaha farriinta ah ee hore iyo dib ugu noqda, takhasusayaasha ayaa saxeexi kara hal meel isla markaana waxay arki karaan qaabka ugu dambeeyay ee dukumiinti kasta.
Si aad runtii ugu faa'iidaysato, u noqo mid sidan ah, labada habeyn waa in ay isdhex gashadaan midba midka kale, oo la mid ah kuwa ku habboon guurka qasabka ah. Waa kuwan dhowr waxyaabood oo IT-da waa in ay ka fekeraan isticmaalka Microsoft Office 365 iyo SharePoint si lamid ah oo la mid ah oo iyaga laftoodu ay si wada jir ah u shaqeeyaan.
Si aad u sameyso shaqadan midaysan ee dhexdhexaadka ah, isku xidhka SharePoint Xafiiska 365 waxaa lagu sameeyaa Amarrada Xafiiska Xafiiska Xafiiska SharePoint. Halkaas, waxaad ku dari kartaa, kormeeri kartaa, iyo ka-daadi kartaa ururada leh barnaamijka. Si kastaba ha noqotee, faahfaahinta xiriirka labada marxaladoodu waa dhowaan habeenkii gaarka ah - oo kaliya qayb yar oo habraac ah. Kooxdaada ayaa sidoo kale u baahan doonta inay waqti hore u qorsheeyaan sida aad u shaqeyn doonto lammaanaha cusub.
In kasta oo aan la ogaan karno waxqabadyada ka soo baxa SharePoint, maamulayaashu waxay u baahan yihiin inay doortaan qofka loo baahan yahay in la siiyo aragtidiisa iyo wax ka bedelida xuquuq kasta oo isugu jirta kulamada SharePoint, iyo sida xuquuqdaas loo kormeerayo dhismaha horumarineed. Maadaama ay shaqaaluhu dib u socdaan, dhisaan habab iyo nidaam loogu talagalay isbeddelada oggolaanshaha iyadoo la raacayo habka ugu haboon ee degdegga ah.
Waraaqaha isku dhafan waxay sameeyaan shaqada guurka habboon, iyo SharePoint waxay muujineysaa sida ay si aad ah u furan tahay iyadoo ay la hadlaan Xafiiska 365 iyo macaamiisha ugu dambeysa. Sida Microsoft ku muujiso boggeeda, SharePoint waxay u muuqataa macaamiisha dhammaadka iyada oo loo marayo barnaamijka webka, halkaas oo ay ka fiirsan karaan noocyo kala duwan. Macaamiisha waxay raadin karaan dukumeentiyada, wareejinta faylasha OneDrive, waxay la shaqeeyaan dadka kale, ama u gudbiyaan faylasha jira kooxahooda. Marka wadar ahaan, dukumeentiyada waxaa lagu soo bandhigi karaa ururka oo dhan gudaha gudaha SharePoint. Aragtida asaasiga ahi waxay u sahlanaataa kooxda oo dhan inay aqoonsadaan waxa dhacaya oo si dhib leh u furaya barnaamij kasta oo webka ah.
Ka hor intaanay kor u qaadin qalabkii wadajirka ah ee sida SharePoint, xakamaynta riwaayaddu waxay ahayd riyo xun - inkastoo loogu talagalay dhammaadka macaamiisha. Markaa ka dib, marka khabiirku sameeyey dukumeenti ku jira Microsoft Word ama Excel oo u soo diray email ahaan, ka-faa'iideystuhu waxa uu ilaalin karaa dib-u-qaabaynta dib-u-cusboonaynta. Haddii ka-faa'iideystaha isticmaalo Is-beddelka is-beddelka ka hor inta aan wax laga beddelin dukumiinti, kooxdu waxay u baahan doontaa inay dib-u-dhigto haddii is-beddelada la beddelo.
Hase yeeshee, maantadan, Microsoft SharePoint ma aha oo kaliya inay ku fashilantay khaladaadka ka yimid noocyo kala duwan, laakiin maaddaama qof kasta oo ka shaqeynaya meel la mid ah, waxa kale oo uu ku darayaa taariikh nololeed oo u saamaxaysa macaamiisha inay baaraan dukumiinti hore.
In kasta oo xaqiiqda ah in ay jiraan qalab kala duwan oo la heli karo, Microsoft PowerPoint ayaa weli ah qalabka ugu caansan ee barashada. Si kastaba ha noqotee, iyadoo la isticmaalayo isku xirnaansho cusub, mar dambe waa inaanad ku jirtaa meel la mid ah si aad u soo bandhigto lamaanayaasha ganacsiga. Isticmaalka SharePoint, waxaad soo bandhigi kartaa bandhigyadaada PowerPoint ee macaamiisha iyo iskaashatada aduunka oo dhan adigoo kaliya labo jeer gujis ah. Iyadoo aan loo eegin haddii aad ka faa'iideysaneyso adigoo wada sheekeysi fiidiyow ama madax-banaan, isbarbar-dhigiddu waxay kaa caawineysaa inaad ku qaadato wakhti iyo hanti.
Ururada ugu wanaagsan ee is-dhexgalka, kuwa ku-xigeenku waxay u shaqeeyaan inay is-xoojiyaan. Waxyaabaha muhiimka ah ee SharePoint waxaa ka mid ah ins Microsoft Office alaabta iyo dukumiintiyo ka faa'iideystayaal badan. Dajinta ugu weyn ee ugu wayni waa DocuSign, taas oo ku dari karta kartida lahaanshaha qandaraasyada, talooyinka, iyo dukumiintiyo kala duwan. Tan iyo inta badan qaybtaas ayaa la dhexgalaa gudaha SharePoint, khabiiradu waxay sameyn karaan nidaamyo adag oo adag si tartiib tartiib ah, wax walba oo hal meel ah looga ilaaliyo dalabaadka soo socda.
Microsoft Office 365 waxay qaadatay software-ka ugu caansan ee barnaamijka loo yaqaan daruuraha, taas oo ka dhigeysa in yar oo dalbanaysa in la kormeero hawlaha. Waqtiga goorta Xafiiska 365 waxaa isku dhafan SharePoint, maamulayaasha waxay samayn karaan aasaas oo ay ka mid yihiin asxaabtooyadu oo aan ka heleynin koox ka mid ah farsamoyaqaannada iyo in ay u fidiyaan lamaanayaasha dibadda. Waxyaabaha ugu dambeeya waxay noqon doonaan ballaarinta waxtarka, taas oo macnaheedu yahay in qof kastaa uu qaban doono wax kasta oo ka yar, ka caawinta ganacsiga si deg deg ah.
Maadaama maamulaha rajeynaya inuu ka faa'iideysto waxyaabahan caanka ah ee Microsoft, waxaa jira waxyaabo gaar ah oo aad qaadi kartid si aad u dammaanad qaadid kartidaada iyo barashada guurka. Qaar ka mid ah kuwa rajeynaya inay abuuraan macquul ah xagga isticmaalka Microsoft Office 365 iyo SharePoint, talaabada ugu horreysa waxay si joogto ah u soo iibsata Microsoft MCSA: Shahaadada 365 Xafiiska.
Markaad xanuunsato Xafiiska 365, u keen xiriiriyahaaga Microsoft ula heerkan soo socda MCSE: Wax-soo-saarka si loola tacaalo SharePoint.
Koorsada Shahaadada Horumarinta MCSE